शिशिर भण्डारीले पढाएका जनक गन्धर्वले “मैले गल्ती गरे” भन्दा शिशिर रोए ! दशैलाई आमा, भाईलाई कपडा किनेर दाङ फर्के (भिडियो हेर्नुस) – दैनिक नेपाल न्युज
शिशिर भण्डारीले पढाएका जनक गन्धर्वले “मैले गल्ती गरे” भन्दा शिशिर रोए ! दशैलाई आमा, भाईलाई कपडा किनेर दाङ फर्के (भिडियो हेर्नुस)
(शिशिर भण्डारी) सुस्तमनस्थितिका आमा बुवा पाल्न र ७ बर्षका सानो भाईलाई पढाउन १२ बर्षको उमेरमै आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गर्दै दाङबाट काठमाडौंमा सारँगी बजाउन आएका जनक गन्धर्वको स्कुल पढ्न थालेपछिको यो पहिलो दशैं । हामीले केह महिनाअघि जनकलाई गोपीकृष्ण हलमा सारँगी बजाउँदै गरेको अवस्थामा भेटेपछि उनले परिवार र आफ्नो पिडा सुनाए । पढ्न मन भएको बताए । जनकलाई पढाउन हामीलाई पक्कै चुनौती थियो, उनलाई पढाएर मात्रै नहुने, कमाउने छोरो पढाईमा लागेपछि आमा, बुवा, भाईलाई कस्ले पाल्ने ? आउने चुनौतीलाई सामना गर्दै जान्छौं भन्ने सोचेर जनकलाई ललितपुर, थेचोको सोमाङ एकेडेमीको कक्षा ३ मा जनकलाई पढाउन थाल्यौं ।
जनकलाई पढाईको खर्च लाग्दैन तर होस्टेल खर्च मासिक ७ हजार हामीले तिर्ने गरेका छौं । यसका लागि एस्तर थापा दिदी, सोमाङ एकेडेमीका प्रिन्सिपल र शिक्षकहरुको सहयोग बिर्सनै नसकिने छ । जनक मन लगाएर पढ्दैछन् । बेला बेलामा हामीले नै जनकको आमा बुवाका लागि खर्च पठाईदिन्छौं र आफुले सकेको काम गर्न पनि सुझाउँछौं । चलेका RAP गीतहरुलाई सारँगीको धुनमा रोचक शैलीले गाउने कला भएका जनक गन्धर्व भाईलाई सँगीत क्षेत्रमा अघि बढाउनु पनि अर्को लक्ष्य हो, यद्यपी जनकलाई पढाईको बानी पानु अर्को चुनौती भएको छ, हामीलाई ।
बिचमा जनकको बारेमा स्कुलबाट उनको बारेमा धेरै नै कम्प्लेन आएपछि हामीले उनको घर निर्माण योजना पनि पछि सार्यौं । मैले पढ्नु पर्छ अनि मेरो घर बन्छ, मेरो भाईले पढ्न पाउँछ, मेरो आमा बुवा सुखी र खुशी हुन्छन् भन्ने पाठ हामी जनकलाई सिकाईरहेका छौं । जनकको घर निर्माणका लागि आएको केहि सहयोग हामीसँग सुरक्षित छ । आर्थिक अभावका कारणले उनले गाएको गीतको भिडियो बन्न सकेको छैन । यसैबिच दशैं नजिक आउँदा स्कुल बिदा भएपछि भोली जनक दाङ जाँदैछन् । घर जानुअघि आफु, आफ्नो सानो भाई र परिवारलाई उनले नयाँ कपडा किने ।
दशैं खर्चको रुपमा दाङकै साथीको साथमा केहि रकम पनि पठाउँदैछौं । यसरी जनकको शिक्ष र उनको घर निर्माणमा हामीलाई धेरै चुनौती छन्, तपाईहरुको साथ र सहयोगले पक्कै हामीले हार खाने छैनौं । सदैव हजुरहरुको साथ र सहयोग रहिरहोस । सबैलाई बिजया दशमी २०७६ सालको मुरी मुरी शुभकामना । जनकको शिक्षा र भविष्य निर्माणको लागि सहयोग गर्न ९८११००६९२९ मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
फोरजी सेवालाई क्षमताअनुरूप सञ्चालन गर्नुपर्दछः प्रधानमन्त्री